A na-ejikwa weebụsaịtị a Ụlọ ọrụ Joopzy. N'ebe niile na saịtị ahụ, okwu ahụ "anyị", "anyị" na "nke anyị" na-ezo aka Joopzy.com. Joopzy.com na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwaọrụ, na ọrụ dị site na saịtị a, gị onye ọrụ ahụ, ọ dị ka ịnakwere usoro niile, ọnọdụ, atumatu na ọkwa niile ekwuputara ebe a.
Na agbanyeghị ga-akwụsịpzy.com, ndị isi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị mmekọ, ndị nnọchi anya, ndị ọrụ aka, ndị ọrụ ntanetị, ndị na-eweta ọrụ, ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ndị na-enye ikike ga-akwụ ụgwọ maka mmerụ ahụ ọ bụla, mfu, na-ekwu, ma ọ bụ na-atụghị anya ọ bụla. , ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla, gụnyere, na-enweghị mmachi uru furu efu, ego furu efu, nchekwa furu efu, ọnwụ nke data, ụgwọ ndochi, ma ọ bụ mmebi ọ bụla yiri nke a, ma ọ dabere na nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere nlefuanya), ụgwọ siri ike ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ebilite. site na ojiji nke ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla enyere site na iji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka mgbagha ọ bụla ndị ọzọ metụtara n'ụzọ ọ bụla maka ojiji nke ọrụ ahụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, mana ejedebeghị na, njehie ma ọ bụ ihe omimi ọ bụla na ọdịnaya ọ bụla. ma ọ bụ mfu ma ọ bụ mmebi ụdị ọ bụla ebutela site na iji ọrụ ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) biputere, bufee ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ site na ọrụ ahụ, ọbụlagodi na enwere ndụmọdụ banyere ohere ha. N'ihi na steeti ụfọdụ ma ọ bụ ikike anaghị anabata iwepu ma ọ bụ mmachi nke ụgwọ maka ihe ọghọm ma ọ bụ nke na-adabaghị, na steeti ma ọ bụ ikike ndị a, iwu anyị ga-amachi oke oke iwu kwadoro.
Agree kwenyere indemnify, chebe ma jide adịghị njọ joopzy.com na nne na nna anyị, enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị isi, ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ọrụ ikikere, ndị na-enye ọrụ, ndị na-arụ ọrụ n'okpuru, ndị na-eweta ọrụ, interns na ndị ọrụ, enweghị mmerụ ọ bụla na-ekwu ma ọ bụ na-achọ, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, nke ndị ọzọ ọ bụla mere n'ihi ma ọ bụ na-esite na ngabiga nke Usoro Ọrụ a ma ọ bụ akwụkwọ ha tinyere site na nrụtụ aka ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.